ॐ लेख्दै वि.सं. २०७६ असोज २८ गते मंगलबारको राशिफल् पढ्नुहोस आजको कार्य सफल हुनेछ - ramechhapkhabar.com
ॐ लेख्दै वि.सं. २०७६ असोज २८ गते मंगलबारको राशिफल् पढ्नुहोस आजको कार्य सफल हुनेछ
मेष-तपाईंको लागि धेरै खुशी र आनन्द – किनभने तपाईंले जीवनको पूरा आनन्द उठाउने तय भइसकेको छ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नी पत्नीसँग वनभोजमा जान धेरै राम्रो दिन। यसले आफ्नो मुड परिवर्तन मात्र होइन आफ्नो गलतफहमी मेटाउन पनि मद्दत गर्नेछ। आज तपाईंलाई प्रेमको वरदान प्राप्त हुने देखिन्छ। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। प्रेम र राम्रो खाना वैवाहिक जीवनका मूल कुराहरू हुन्; र तपाईंले आज यी सबैको राम्रो अनुभव गर्न जानु हुँदैछ।
वृष-धेरै चिन्ता र तनाउले तपाईंको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। तपाईंले मानसिक स्पष्टता कायम गर्न भ्रम र निराशा त्याग गर्नु पर्नेछ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। तपाईंले तिनीहरूलाई खुसी पार्न जति गरेपनि – तपाईंसँग बस्ने मानिसहरू तपाईंसँग धेरै खुसी रहने छैनन्। आज आफ्नी प्रियतमासँग शिष्टतासाथ व्यवहार गर्नुहोस्। व्यावसायिक मामिलामा एउटा मित्रको अमूल्य समर्थनले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई आफ्नो नराम्रो पक्ष देखाउन सक्छ।
मिथुन-स्वास्थ्यको दृश्यबाट धेरै राम्रो दिन। तपाईंको हँसिलो मनले तपाईंको इच्छित बल दिन्छ र तपाईंलाई विश्वस्त राख्नेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। रोमान्टिक सम्झनाहरुले तपाईंको आजको दिन बित्नेछ। साझेदारी परियोजनाहरूले सकारात्मक परिणाम दिनु भन्दा बढी समस्याको सिर्जना गर्नेछन् – तपाईं विशेष गरी कसैले तपाईंसँग फाइदा उठाउनको लागि आफैंले अनुमति दिएकोमा आफैमाथि रिसाउनु हुनेछ। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
कर्कट -बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। आर्थिक सुधार निश्चित छ। तपाईं यसको लागि बाहिर जानु पर्ने भए तापनि – छोराछोरीसँग आनन्द मनाउन आफ्नो खाली समय खर्च गर्नुपर्छ। आज कोही तपाईंको प्रेम बीच आउन सक्छ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। आफ्नो जोडीको जरुरी कामले गर्दा तपाईंको दिनको योजना बिग्रिन सक्छ, तर अन्तमा तपाईंले यो राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
शिंह-पिठ्युँको लगातार दुखाइले पीडित हुन सक्नुहुन्छ। सामान्य कमजोरी पनि भएमा यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आज अरू सबै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। तपाईंले आफ्नो घरको वातावरण परिवर्तन गर्न अघि सबैको अनुमोदन लिएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो प्रेमीकासँग रातको सम्बन्ध धेरै साना मुद्दाहरूको पछि पनि तनाउपूर्ण रहनेछ। सकारात्मक मनोवृत्तिका साथै तपाईंको भित्री मानले कार्यस्थलमा सफलता दिनेछ। भित्री गुणहरूले सन्तुष्टि ल्याउँछ – सकारात्मक दृष्टिकोणले सफलता दिन्छ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आज खर्चको कारण आफ्नो जीवनसाथीसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ।
कन्या- केही व्यायाम गरेर आफ्नो दिन सुरु गर्नुहोस्। यस समय तपाईंले आफैंलाई राम्रो महसुस गर्न सुरू गर्नु हुनेछ – यसलाई नियमित रूपमा दैनिक गर्नुहोस् र यसमा लीन हुने प्रयास गर्नुहोस्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईंको तनाउ कम गर्नेछ। तपाईं पनि भागेदार हुनुहोस र मूक दर्शक जस्तो भएर नबस्नुहोस्। चिन्ता नगर्नुहोस्, आज तपाईँको शोक बरफ जस्तै पग्लिन्छ। नयाँ कुरा सिक्ने तपाईंको प्रतिभा उल्लेखनीय हुनेछ। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। तपाईंको पुरानो साथी आउनेछ र आफ्नो जोडीसँग तपाईंले बिताएका पुराना सुन्दर सम्झनाहरुको सम्झना गराउन सक्छ।
तुला-स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। अनुमानले लाभ हुनेछ। तपाईंको लापरवाही मनोवृत्तिले आमाबाबुको चिन्ता बढ्नेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्नु अघि उनीहरूलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ। प्रेमले सकारात्मक चटक देखाउने छ। यो रचनात्मक प्रकृतिका परियोजनाहरुमा काम गर्ने र आफैलाई व्यक्त गर्ने पनि राम्रो समय हो। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
वृश्चिक-स्वास्थ्य पूर्णत ठीक रहनेछ। आज तपाईंको समर्पण र मेहनतले पहिचान पाउनेछ र तपाईंको लागि केहि आर्थिक इनाम ल्याउनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग केही तनाउमुक्त समय बिताउनुहोस्। रोमान्सले तपाईंको हृदय र मनमा शासन गर्नेछ। नयाँ प्रस्तावहरू लोभ्याउने हुनेछन् तर यसका लागि कुनै पनि हतार निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुने छैन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने – तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ। कसैले वैवाहिक जीवन झगडा र यौन हो भनेर सोच्ने गर्छन्, तर आज सबै निर्मल हुनेछ।
धनु -बुजुर्गहरूले राम्रो लाभको लागि आफ्नो अतिरिक्त ऊर्जाको सकारात्मक प्रयोग गर्न आवश्यक छ। दीर्घ अवधिको आधारमा तपाईंले लगानी गर्नुभयो भने पर्याप्त लाभ हुनेछ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। आफ्नो प्रियसँग सानो छुट्टी मनाइरहेकाहरूको लागि अत्यधिक स्मरणीय समय हुनेछ। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंलाई आज विवाहको साँचो परमानन्द थाहा हुनेछ।
मकर-मुश्किल स्थितिको सामना गर्दा तपाईं दुखी नहुनुहोस्। खानाले आफ्नो स्वादको लागि नूनको ऋण लिएको हुन्छ – केही दुखको आवश्यकता पर्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईंले आनन्दको मूल्य महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंको मुड परिवर्तन गर्न केही सामाजिक जमघटमा जानुहोस्। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई लामो समयसम्मका बकाया र बिलहरू तिर्नको लागि सुविधा हुनेछ। आफ्ना परिवारका सदस्यहरू प्रति तपाईंको हावी मनोवृत्तिले मात्र अनावश्यक तर्क सुरु हुनेछ र दोषारोपण ल्याउन सक्छ। प्रियसँग क्यान्डी फ्लोस् र टफी बाँट्ने कार्डमा सम्भावना देखिन्छ। आफ्ना वरिष्ठहरूलाई हल्कासित नलिनुहोस्। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आज, तपाईंले आफ्नो विवाहको दिन गरेका सबै भाकल साँचा रहेछन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। आफ्नो जोडी तपाईंको प्राण हो।
कुंभ-मनोरञ्जन र आनन्दको दिन। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। तपाईंको साथीहरूले तपाईंको उदार व्यवहारको फाइदा नलिउन। तपाईंले आफ्नो जीवन भन्दा बढी तपाईंलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुन: आकलन गर्ने समय। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
मीन-आफ्नो ऊर्जा संकटमा परेका कसैको मद्दत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस – अरूको लागि कुनै प्रयोगमा आएन भने यो नश्वर शरीरको प्रयोजन छैन। अरूले भनेको मानेर लगानी गरेमा आज आर्थिक घाटाको सम्भावना देखिन्छ। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। प्रेमको शक्तिले तपाईंलाई प्रेम गर्ने कारण प्रदान गर्दछ। तपाईं सबैको लागि आज धेरै सक्रिय र सामाजिक कार्य गर्ने राम्रो दिन हुनेछ – मानिसहरूले सल्लाहको लागि तपाईंको मुख हेर्नेछन् र तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नेछन्। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।